यसरी थाहा पाउन सकिन्छ शरीरलाई दैनिक कति पानी चाहिन्छ ? – Superhit News
यसरी थाहा पाउन सकिन्छ शरीरलाई दैनिक कति पानी चाहिन्छ ?
आफ्नो शरीरमा पानी पुगेको छ\_छैन भन्नेबारे पिसाबबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । हलुका पहेँलो रङको पिसाबलाई सामान्य मानिन्छ । यदि पिसाब गाढा पहेँलो या सुनौलो रङको छ भने पानीको मात्रा नपुगेको भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । यस्तो वेला पर्याप्त मात्रामा पानी सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ पिसाबको रङ हेरेर पानी पुगेको नपुगेको पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ । भिटामिन बी कम्प्लेक्सजस्ता औषधि सेवन गर्दा पनि पिसाबको रङ गाढा पहेँलो देखिन सक्छ । यसका साथै अन्य केही औषधिहरू सेवन गर्दा पिसाबको रङ परिवर्तन हुन्छ । जब हामी धेरै कसरत गर्छोैँ सो समयमा शरीर धेरै तातो हुन्छ । त्यतिवेला तुरुन्त पानी पिउनु राम्रो हुँदैन । यदि पिउनै पर्ने भएमा पनि दुई गिलासभन्दा बढी सकेसम्म नपिउनु नै फाइदाजक हुन्छ ।
← यस्ता छन् लसुनको हरियो पात खानुको फाईदै फाईदा
तपाइँ भुँडी लागेर तनावमा हुनु हुन्छ भने यस्तो छ भुँडी घटाउने अचुक शुत्र →